Hurdada habeenkii waxa ay kordhisaa quruxda wajiga iyo soo jiidashadiisa - Horn Future
Hurdada habeenkii waxa ay kordhisaa quruxda wajiga iyo soo jiidashadiisa
London –Daraasad cusub oo British ah ayaa sheegtay in helitaanka hurdo ku filan habeenkii bini’aadanka ay kordhiso quruxda wajiga iyo soo jiidashadiisa,marka la barbardhigo qofka seexda dhowr saacadood kaas oo soo jiidashadiisu ay ka yar tahay dhinac dadka kale.
Daraasadan ayaa waxa sameeyeen cilmi- baadhayaal ka tirsan jaamacadda Liverpool ee British ka ah, taas oo lagu faafiyay majallad xilliyeedka “Royal Society Open Science” ee British ka ah.
Tijaabada daraasadan ayaa waxa ka qayb qaatay 25 kamid ah arday jaamacadeed oo isku gu jira lab iyo dhaddig, kuwaas oo laga codsaday inay isku dayaan in ay si fiican u seexdaan 2 habeen oo isku xiga.
Toddobaad ka dib ayaa waxa laga codsaday inay seexdaan 4 saacadood oo kaliya habeenkaii 2 habeen oo isku xiga,waxana kadib cilmi-baadhayaalkani ay ka qaadeen muuqaalo wajiyada ardaydan iyaka aanan adeegsan waxyaabaha budada ah ee qurxinta kadib hurdadii wanaagsan iyo tii xumayd ee ay seexdeen.
Waxa markaas kadib la waydiiyey 122 qof inay eegaan muuqaalada ardaydan lagu sameeyay daraasadan,ka dibna waxa loo qaybiyay iyaga oo lagu saleeynayo soo jiidasho,caafimaad, lulmo iyo kalsooni, waxana ay ahayd su’aasha la weydiiyay “Ilaa heerkee baad rabtaa in aad ku la xidhiidho qofka muuqaalkan leh?”.
Waxa kooxdii dabagalku ay sheegtay inuu yar yahay xiisaha ay u qabaan inay la xidhiidha ardaydan daalan, kuwaas oo sidoo kale ku tilmaamay inay yihiin kuwo caafimaadkoogu yar yahay.
Cilmi-baadhayaasha ayaa waxa ay faahfaahiyeen in wajiga daalan,haddii ay sabab u tahay hurdo la’aan ama waxyaabo kale,in taas laga yaabo inay kicisay dareenka dadka badhkood oo ahaa inay ka diidaan iyaka oo ka cabsi qabay in dadkan uu haleelay mid kamid ah cudurada.
Waxa sido kale cilmi-baadhayaashu ay tilmaameen in wareegyada madow ee agagaarka indhaha iyo bararka ee ay sababi karto hurdo-wareerku inay ka hor joogsato xidhiidhka bini’aadanku la yeesho dadka kale.
« Al-Bashiir oo maanta oo Salaasa ah ku eedeeyay dilaaga Sisi in uu hubeeyo kooxaha macaaradka	» Dr. Tedros oo kasoo jeeda dalka Ethiopia oo loo doortay agaasimaha guud ee cusub ee WHO